Beeraha Waxay Fulinaysaa Alaab-qeybiyeyaal iyo Warshad - Shiinaha Soo Saarayaasha Aruurinta Beeraha
Faahfaahinta Waxsoosaarka '3Z disc disc' ridger nooca taxanaha ah waxaa badanaa loo isticmaalaa berrinka baradhada, iyo khudradda. Waxay leeyihiin astaamaha masaafada sare ee fuulista, hagaajinta xagalka habboon, kala duwanaanshaha taageerada ballaaran iyo la qabsiga xoogan. Tayada sare ee saxanka birta guga ee 65 manganese ayaa loo isticmaalaa qashin qubka. Daaweynta kuleylka ka dib, adkeysigu waa 38-46 HRC, dabacsanaan iyo adkeyn wanaagsan, waxqabadka gelitaanka wanaagsan ee ciidda, leexinta carrada, tayada daboolida ayaa buuxin karta shuruudaha farsamo ee beeraha pr ...
Faahfaahinta alaabta Qaab dhismeedka ayaa macquul ah oo hawlgalku waa mid jilicsan, oo ku habboon waddada weyn iyo gaadiidka dhulka. Tusaale ahaan, gaariga 2-tan ah waxaa inta badan lagu qalabeeyaa 12-25 cagaf oo cagaf ah, bareegguna wuxuu noqon karaa bareeg isku dhaca, bareeg farsamo ama bareeg hawo ah. Ikhtiyaar ikhtiyaar bidix iyo midig ah ama seddex qashin. Foomka qashin-qubka: saxanka qaansada ee laastikada ah. Foomka Jiidida: kala-goynta traod live. Daaweynta dusha: mashiinka engeeg shot weyn si loo baabi'iyo walbahaarka walxaha, derusting, deoxidizing, antir ...
Tilmaanta Waxsoosaarka Beerta wareega ee leh ilkaha goynta wareega sida qaybaha shaqada ayaa sidoo kale loo yaqaan 'cultivator'. Marka loo eego qaabeynta dhidibka wareega wareega, waxaa loo qaybin karaa nooca dhidibka jiifka ah iyo nooca dhidibka toosan. Jaan-goynta xagasha wareegga leh ee dhidibka gunta si ballaadhan ayaa loo isticmaalaa. Qoondayntu waxay leedahay awood xoog leh oo lagu burburiyo ciidda. Hal qalliin ayaa ka dhigi kara ciidda ganaax jaban, carro iyo bacrimin si siman isku qasan, iyo heerka dhulka, oo buuxin kara shuruudaha ...
Faahfaahinta Waxsoosaarka 3S subsoiler-ka badanaa wuxuu ku habboon yahay subsoiling-ka berrinka baradhada, digirta, cudbiga oo wuxuu jebin karaa ciidda adag ee dusha ka sarreysa, jilcin kara ciidda iyo jajab nadiif ah. Waxay leedahay faa'iidooyin qoto dheer oo la hagaajin karo, noocyo kala duwan oo codsi ah, ganaax ku habboon iyo wixii la mid ah. Subsoiling waa nooc ka mid ah tikniyoolajiyadda beerashada oo lagu dhammaystiro isku-darka mashiinka subsoiling iyo aaladda tamarta cagaf-cagafyada. Waa hab beereed cusub oo majarafad hoosaad leh, xaaqis aan gidaar lahayn ama jeex jeex jeexan t ...
Beeraha Hirgelinta Disc Beerka Loo Iibinayo
Faahfaahinta alaabada Qalabka xaaqida waxaa loogu talagalay inuu ka shaqeeyo dhammaan noocyada carrada howlaha aasaasiga ah sida jebinta ciidda, carrada oo kor loo qaado, carrada oo la beddelo iyo carrada oo la isku daro. Waxaa loo isticmaalaa furitaanka beeraha cusub iyo ka shaqeynta meelaha dhagaxa leh.Waxaa loo isticmaali karaa si fudud meelaha dhagxaanta leh iyo kuwa xididdada leh. Qaybta Tilmaamaha Faahfaahinta Farsamada 1LYQ-320 1LYQ-420 PDP-2 PDP-3 PDP-4 Ballaadh ballaadhan mm 600 800 500 800 1000 Qoto dheerida shaqada mm 200 200 250-300 250-300 250-300 Dhexdhexaad Disc ...